Asfalta farany hoditra manify tantera-drano Tar APP Fa Road sy Bridge - China Xinle Hongtai tantera-drano
Asfalta farany hoditra manify tantera-drano Tar APP Fa Road sy Bridge
Marika Name: JIELANGTE
Hateviny: 3mm, 4mm, 5mm
Length: 10m / horonan-taratasy
Fampiharana: lalana, tetezana
Ambony ara-nofo: PE sarimihetsika, Sand, Schist flake, sns
Tyro: py, G
Sintony hery: 800N / 5cm
Weight: 40kg / horonan-taratasy
Araka ny fepetra takiana
10 andro eo nahazo petra-bola
Road fanorenana APP tantera-drano ny hoditra manify ny APP farany fitaovana, nameno iray isan-karazany additives natao tamin'ny asfalta coating impregnated polyester base (py), andaniny roa feno polyethylene sarimihetsika, na amin'ny ambony hafafiny tsara Sand, mineraly poti vita tamin'ny manokana fampisehoana tondro sy tantera-drano fampiasana ny fitaovana. Entana araka ny ara-batana sy ara-mekanika fananana dia nizara ho karazana I sy II. Soraty I dia mety ho mafana Mix asfalta mivaingana lalana sy ny tokotanin-tsambo, Type II dia mety ho asfalta Mastic mivaingana lalana sy ny tokotanin-tsambo. Araka ny sakan'ny 3mm, 4mm, 5mm, sakan'ny 1000mm.
izany no ampiasaina ao amin'ny asfalta mivaingana tetezana, ary azo ampiasaina koa amin'ny asfalta mivaingana rarivato, seranam-piaramanidina fiaingana, asfalta simenitra lampivato, asfalta simenitra lampivato, asfalta mivaingana lampivato tantera-drano sy ny entona sakana ny lavaka, tsy tantera-drano ny fitobiam-piarakodia tampon-trano, ary ny hafa tsy tantera-drano ny mitondra asa.
Previous: Self-adhesive asfalta tantera-drano ny Sheet Material for manda tantera-drano
3mm, 4mm Modified manify tantera-drano bituminous ...
Self-adhesive godorao tantera-drano Sheet Material ...
Bituminous farany tantera-drano / Waterstop manify
2mm 3mm 4mm 5mm SBS Modified bituminous membran ...